मनोरंजन Archives - Like For Nepal
३२ बर्षका पल र १७ की समीक्षाबीच सामिप्यता : छोड्न नमान्दा १ करोड अफरपछि विवाहको कागज ? के हो त वास्तविकता ?
काठमाडौ । फिल्मी दुनियाँ सबैभन्दा बढी चर्चा, गसिप र विवादको दुनियाँ भएकैले होला नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रपनि अछुतो छैन । हरेक क्षण यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै कुरा कि चर्चामा आउँछ कि वि’वा’दमा आउँछ होइन भने गसिपमा पक्कै आइरहेको हुन्छ । फिल्मको नायक, नायिकाको प्रेम सम्बन्ध धेरैका लागि चासोको विषय बन्छ। मिडियाका लागि त यो खुराक नै भइहाल्यो। नेपाली सिने जगतमा पनि नयाँनयाँ प्रकरणहरु आइरहन्छ। सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक चर्चा र बहस शुरु भइरहेको हुन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा नेपाली सिने जगतमा दुई कलाकार चर्चाको शिखरमा छन्। ती हुन् नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी। नायक पल शाह ३२ बर्षका भए । समीक्षा भने मात्र १७ बर्षकी छिन् । उनीहरुबीच प्रेमको मात्र चर्चा चलेको भए धेरैलाई सामान्य लाग्थ्यो होला। किनकि पलको नाम उनले काम गरेका अधिकांश अभिनेत्रीसँग जोडिन्छ। तर कुरो अर्कै बाहिर आएको छ । च...
आजभोलि सामाजिक संजाल अन्तरगत विभिन्न किसिमका संजालहरू छन्। जसअन्तर्गत हाम्रो परिबेशमा फेसबुक अत्यन्तै लोकप्रिय संजाल नेटवर्क भित्र पर्छ। सर्वाधिक जनसंख्याले यो संजालभित्र जोडिएका छन्। त्यसगरी पछिल्लो समय यता टिकटक पनि सर्वाधिक रुचाइएको सामाजिक संजाल भित्र पर्ने गर्दछ।अधिकांश जनसंख्या जहाँ बुढाबुढी देखि लिएर केटाकेटीसमेत जोडिएर आफ्नो छोटो कला प्रश्तुत गर्ने साथै अरुले अपलोड गरेका भिडियो तथा गीतमा अभिनय गरेको पर्याप्त भेटिन्छन्। कतिपय यसको प्रयोगकर्ताहरू त टिकटकमा आफ्नो विभिन्न भिडियोहरू लगाएर दर्शकहरूले अत्याधिक मन पराएर भाइरल नै हुने गरेका छन्। यसरी भाइरल हुनेहरूमा केटाकेटी,युवा पुस्ताहरू मात्रै नभएर बुढाबुढी हरू पनि छन। उनीहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी भएतापनी आफ्ना नानीहरूको सहयोगमा अकाउन्ट बनाएका हुन्छन्। टिकटक हेर्नको लागि कतिपय सानासाना नानीहरूलाई पनिबेक किसिमको लत नै बसिसकेको ...
टीका सानुले अंग्रेजीमा दोहोरी गाएपछि ..( भिडियो हेर्नुहोस् )
नेपाली लोकसंगीत पारखी माझ युवा गायिका टिका सानु निकै चर्चित छन् । उनी विशेष गरी लाईभ दोहोरीको लागि माहिर मानिन्छन् । इन्द्रेणी मार्फत धेरै दर्शक माझ परिचित गायिका अहिले एक टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा काम गर्छिन् । साथै लाईभ दोहोरी समेत चलाउँछिन् । उनले टेलिभिजनमा आउने दोहोरी आफ्नो युट्युब च्यानल बाट पनि सार्वजनिक गर्ने गरेकी छन् । यसै बीच टीकाको भर्खर मात्र एउटा दोहोरी विवादमा आएको छ । उनले प्रस्तुत गरेको दोहोरीमा अङ्ग्रेजी शब्द संयोजन गरिएको छ । उनको सो दोहोरी सार्वजनिक भएपछि दोहोरीका केही अग्रजहरुले पनि गीतको आलोचना गरेका छन् । नेपाली लोकसंगीत पारखी माझ युवा गायिका टिका सानु निकै चर्चित छन् । उनी विशेष गरी लाईभ दोहोरीको लागि माहिर मानिन्छन् । इन्द्रेणी मार्फत धेरै दर्शक माझ परिचित गायिका अहिले एक टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा काम गर्छिन् । साथै लाईभ दो...
नेपाली दर्शकहरूले औधी रूचाएको चर्चित हाँस्य टेलि श्रृंखला सक्किगोनि प्राय सधै ट्रेडिङ न.१ मा आउने गर्छ।सक्किगोनि हाँस्य टेलि श्रृंखला हिमालय टेलिभिजन र जेपिटी क्रियसन युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुदै आएको छ। सक्किगोनि टिमका कलाकारहरूले दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएकै कारण छोटो समयमा नै आसाध्यै लोकप्रिय बन्दै आएको छ। सक्किगोनि टिमले दर्शकहरूलाई पुर्ण मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुती मात्रै नभई समाजमा भएको बिकृति प्रति बुलन्द आवाज सहित जनचेतनामूलक सन्देशहरू पनि दिदै आएको छ। गत हप्ता भाग ४५ बाट १२० केजी की टिकापुरकी भावना आचार्य को सक्किगोनिमा प्रबेश पछि सक्किगोनि झन रोचक बन्दै गएको छ।उनि जयन्तेको श्रीमती पाडेको बुहारीको रोलमा देखिएकी छिन्। हिजो प्रसारण भएको ४६ श्रृंखलामा जयन्तेसंग बिबाह भएको छ। उनी १२० केजीको भए पनि टिकटकमा आफ्नो कला देखाउदै आएकी थिइन्।उनलाई टिकटकमा सानुमाया भनेर पनि चिन्नि गरिन्...
काठमान्डौ- गायिका प्रविशा अधिकारीले इन्जिनियर निर्माण सिटौलासँग विवाह गरेकी छन्। प्रविशा र निर्माणको विवाह आइतबार झापाको विर्तामोडस्थित एक पार्टी प्यालेसमा भइरहेको छ। वैवाहिक समारोहमा दुवै परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरुको उपस्थिति रहेको छ। गायिका प्रविशा अधिकारीले आफ्ना प्रेमी निर्माण सिटौलासँग गत बिहिबार टिकाटालो गरेकी थिइन्। प्रविशासँग विवाह गर्नकै लागि निर्माण केही समय अगाडि अमेरिकाबाट नेपाल आएका हुन्। प्रविशाले गाएका दर्जन बढी गीतले दर्शकको मन जितिसकेका छन्। निर्माण अमेरिकामा रहेर आईटी क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।दुबै जनाको पारिबारिक उपस्थितिमा बिहे कार्यक्रम आयोजना भएको हो । गायक प्रताप दास तथा ‘द भ्वाइस किड्स’का निर्माता सुशील नेपाल प्रविशाको बिहेमा उपस्थित छन् । उनिहरु एक बर्षयता सम्बन्धमा थिए ।निर्माण झापा चारपानेका हुन् । चर्चित गायिका गायिका प्रविशा अधिकारी अहिले ‘द भ्वाइस किड्स’...
र लोगायक बन्ने सपना बोकेर १० बर्ष अघि काठ’माडौं आएका अलिफ खानले यस क्षेत्रमा धेरै सँघर्ष गरे । सुरुमै ठगिएपछि कहिले दोहोरीमा पछाडि बसेर बजाउँदै, कहिले’ लेवर काम गर्दै उनले सँ’घर्ष जारी राखे । ४ महिनासम्म बिस्कुट चाउचाउ खाएर बसेनन कि, सडक पेटीमा सुतेनन कि । अब हुन्न भनेर बिदेश जाने सुर गरेका अलिफ यतिबेला एक्कासी चर्चा’मा छन् । मिजासिलो स्वभाव र निकै नै मिठो स्वर भएका अलिफ’को स्वरको उच्चतम सम्मान गर्दै संगित’कार एवम् डाइरे क्टर अर्जुन पोख्रेलले दुईवटा गितमा उन’लाई लिने भएका छन् त्यति मात्रै हैन उनी ईन्द्रे’णिमा समेत गए र ईन्द्रेणिमा नै कृष्ण कंडेलले अलिफलाई राख्न प्रतिबद्धता पनि जिकिर गरे । कला र गलालाई सधाबहार सम्मान एवम् उच्चतम प्ल्याटफर्म दिदै आएको ईन्द्रेणि समाजले अलिफको कलालाई समेत स्थान दिनुले थप चर्चामा ल्याउने निश्चित छ। अलि’फको अपार सफकलता पछि अब अलिफले स्टेज र प्लाटफर्महर...
काठमाडौ । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको नाती र शाहरुख खानकी छोरी जोडी बन्ने भएका छन् । तर यो जोडी फिल्मका लागि बन्ने भएको हो । बलिउड निर्देशक जोया अख्तरले आफ्नो नयाँ फिल्म घोषणा गरेकी छिन् । उनले आर्ची कमिक्सलाई फिल्मको आकार दिन लागेकी छिन् । जोयाको यो प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्समा स्ट्रिम हुनेछ। सामाजिक सञ्जालमा यस प्रोजेक्टको जानकारी दिँदै जोयाले आर्ची कमिक्सको स्क्रिनसट सेयर गरेकी छिन् । आफ्नो पोस्टमा, जोया अख्तरले फिल्मको स्टारकास्ट खुलासा गरेकी छैनन्। तर जोयाको फिल्ममा सुहाना खान (शाहरुख खानकी छोरी), अगस्त्य नन्दा (अमिताभ बच्चनकी नाती) र खुशी कपूर (बोनी कपुरकी छोरी) मुख्य भूमिकामा रहने खबरहरू सामाजिक सञ्जालमा छन्। यी तीन कलाकारका छोराछोरी जोया अख्तरको फिल्मबाट डेब्यु गर्ने चर्चा थियो । यो लिस्टमा इब्राहिम अली खानको नाम पनि परेको छ । यद्यपी सुहाना, खुशी र अगस्त्यको कास्टिङबारे आधिकार...
विबाह गरेको लामो समयपछि गर्भवती बनिन् चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्का(भिडियो सहित)
विबाह गरेको लामो समयपछि गर्भवती बनिन् चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्का(भिडियो सहित) विबाह गरेको लामो समयपछि गर्भवती बनिन् चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्का, बच्चा बसेपछि खुशी हुँदै भनिन् मलाई प्रियंका कार्कीको झै हल्ला खल्ला गरेर पाउनु छैन, सुटुक्क घोर्ले छोरो पाउने हो, न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ बिक्री खुला, कति दिने आवेदन? न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज शुक्रबार (असोज १५ गते) देखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनमा ल्याएको छ कम्पनीले २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो। सर्वसाधारणका लागि निष्काशनमा ल्याएको कुल शेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ४५ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहने २० लाख ९२ हजार ५०० कित्ता शेयरको लागि मात्रै सर्वसाधरणले ...
अमेरिकाबाट आएकी महिलासँग केही महिना बिताएका अघोरी बाबा एकाएक बने मालामाल
अमेरिकाबाट आएकी महिलासँग केही महिना बिताएका अघोरी बाबा एकाएक बने मालामाल, अमेरिकी कार्ड होल्डर महिलालाई आफ्नै पत्नि भन्दै धेरै रात रोमान्स गरेका अघोरीलाई ति महिलाले छाड्ने बेला किनीदिएकी रहिछन् बुलेट बाइक, अहिले अघोरी हिँड्न बुलेटमा सरर, हेर्नुहोस् भिडियो यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजाआजा गरी लक्ष्मीपूजा गरिँदै छ ।यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज कार्तिक कृष्ण औँसीको साँझ ऐश्वर्य, धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजाआराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा पर्व मनाइँदैछ ।सफासुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा आज बिहानै घर सफासुग्घर र गाईको गोबर एवं रातोमाटाले लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ । आज विशेषगरी घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, सँघार, कौसी, अटाली, भर्‍याङलगायत स्थानमा सरसफाइ गरी दीपावली गर...